[Review] Xịt khoáng Bioaqua có tốt không? Giá bao nhiêu? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Xịt khoáng Bioaqua có tốt không? Giá bao nhiêu? | Muasalebang in Muasalebang
I-mineral spray ibhekwa njengomsindisi wabesifazane abaningi esimweni sezulu esomile, esingakhululekile. Lona umugqa womkhiqizo okwazi kokubili ukunikeza umswakama nezakhi esikhumbeni, futhi ngasikhathi sinye, ubuye uthuthukise futhi ubuyisele isikhumba esilimele ngempumelelo kakhulu. Omunye wemigqa Amaminerali spray Nokho, ethandwa kakhulu namuhla i-Bioaqua mineral spray. Ngakho I-Bioaqua mineral spray kuhle noma cha? Ake sithole lonke ulwazi oluhlobene ne-Bioaqua mineral spray ne-Phong Izibuyekezo esihlokweni esingezansi.
1 Thola umsuka we-Bioaqua mineral spray
2 Ukubuyekezwa kwe-Bioaqua mineral spray kuhle?
2.2 Mayelana nezithako ze-Bioaqua mineral spray
2.3 Mayelana nokusetshenziswa:
3 Linganisa izinzuzo kanye nokubi kwe-Bioaqua mineral spray
3.1 Mayelana nezinzuzo
3.2 Mayelana nokwehla
4 Ukubuyekezwa kwemigqa emi-3 ye-Bioaqua mineral spray etholakala emakethe namuhla
4.1 1. I-Bioaqua Osmanthus Mineral Mist Yellow
4.2 2. I-Bioaqua Blueberry Mineral Mist Blue
4.3 3. Umbala omhlophe we-Bioaqua Moisturizing Mineral Mist
5 Ungathenga kuphi i-Bioaqua mineral spray? Malini?
Thola umsuka we-Bioaqua mineral spray
I-Bioaqua Mineral Spray iwumkhiqizo ovela eChina. Lona umugqa womkhiqizo wasekhaya waseShayina okwamanje othandwa futhi othenjwa ngabathengi abaningi baseVietnam isikhathi eside.
Lo mugqa womkhiqizo we-Bioaqua mineral spray product ukhishwe ngokuphelele ezingxenyeni zemvelo, eziqukethe usawoti wamaminerali njengeCopper, Calcium, Zinc kanye ne-trace elements ethwele ama-ion aqondile namabi… ikakhulukazi aphephile futhi ayingozi esikhumbeni. I-Bioaqua Mineral Spray ingasetshenziswa kubo bonke ubudala nezinhlobo ezahlukene zesikhumba. Sicela ubheke esigabeni esilandelayo ukuze wazi imininingwane ye-Bioaqua mineral spray!
Ukubuyekezwa kwe-Bioaqua mineral spray kuhle?
Uyazibuza? I-Bioaqua mineral spray Ingabe umugqa womkhiqizo muhle? Ingabe kufanele ngikhethe ukuthenga i-Bioaqua mineral spray ukuze ngiyisebenzise noma cha? Lapha, Izibuyekezo ze-Phong zizohlola ngokuningiliziwe ukwakheka, izithako, kanye nokusetshenziswa kwe-Bioaqua mineral spray ukuze uthole inkomba yakho.
I-Bioaqua Mineral Spray Idizayinelwe ngendlela yebhodlela lepulasitiki elinesivalo esilula kakhulu, elinomthamo ongu-150ml, lizwakala liqinile esandleni. Kulula ukuyisebenzisa lapho uphethe lapho uphuma, sebenza.
Ukupakishwa komkhiqizo kuklanywe ngamathoni wemibala emi-3 eyinhloko: ophuzi, omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka. Ukukhethwa kwalawa mathoni angu-3 ayinhloko ukudala ukusetshenziswa okudonsa amehlo nokuhlaba umxhwele. Sekukonke, ukwakheka kwe-Bioaqua mineral spray kuyashintshashintsha kakhulu futhi akukho okunethezeka kancane kuneminye imikhiqizo yesifutho samaminerali emakethe namuhla.
Mayelana nezithako ze-Bioaqua mineral spray
I-Bioaqua Mineral Spray ikhishwa ezingxenyeni eziningi ezahlukene, isithako esiyinhloko somkhiqizo amanzi amaminerali ahlanganiswe nama-microelements emvelo. Kuyo, kunezinhlobo ezi-3 I-Bioaqua mineral sprayelihambisana namathebula ezingxenye ezi-3 ahlukene njengalezi:
I-Bioaqua Osmanthus Mineral Mist Yellow: Umkhiqizo ukhishwa embalini ye-Osmanthus uhlanganiswe nezinye izitshalo eziningi, okusebenza ukwakha iphunga elimnandi njengembali.
I-Bioaqua Blueberry Blueberry Mineral Mist: Umkhiqizo ukhishwa ezingxenyeni zamajikijolo, okwazi ukunikeza nokwengeza imisoco kanye nomswakama esikhumbeni, ukuze isikhumba sakho sihlale simhlophe futhi sinempilo.
I-White Bioaqua Moisturizing Mineral Mist inomphumela oyinhloko wokuthambisa kanye nokuthambisa isikhumba, isiza ekunakekeleni isikhumba esiqinile nesibushelelezi ngemva kokusebenzisa umkhiqizo.
Uma ubheka ukwakheka kwezinhlobo ezi-3 I-Bioaqua mineral spray Njengoba singabona, i-Bioaqua mineral spray iwumkhiqizo owenziwe ngokukhethekile emvelweni, ikakhulukazi ephephile esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, i-Bioaqua mineral spray iphinde inikeze abasebenzisi izinzuzo ezilandelayo ezivelele:
Ukuba nekhono lokufaka amanzi kanye nokuthambisa isikhumba kahle kakhulu, umkhiqizo usiza ukuhlinzeka nge-pH ezinzile esikhumbeni, ugcine isikhumba sibushelelezi futhi sicwebezela ngemva kokusetshenziswa.
Isiza ukuhlinzeka ngamaminerali abalulekile esikhumbeni, ukugcwalisa izakhi, ukondle isikhumba esonakele ukuze silulame ngokushesha.
I-Bioaqua Mineral Spray nayo inemiphumela yokulwa nokuguga, inciphisa imibimbi ebonakala kusenesikhathi esikhumbeni ngenxa yohlu lwezithako oluhlukahlukene, oluqukethe amavithamini namaminerali amaningi asebenzayo alungele isikhumba.
Ngaphezu kwekhono lokuthambisa, ukulwa nokuguga kwesikhumba, i-Bioaqua mineral spray nayo inekhono elihle kakhulu lokuzilungisa. Umkhiqizo usiza ukugcina isisekelo singakhukhuleki kakhulu, okwenza isikhumba sakho sihlale silawula kahle inani lamafutha amaningi afihliwe ebusweni.
Bhekisela: [Review] Ingabe i-Vichy mineral spray ilungile? Ungathenga kuphi Okuyiqiniso?
Linganisa izinzuzo kanye nokubi kwe-Bioaqua mineral spray
I-Bioaqua Mineral Spray yaziwa njengomkhiqizo ovela e-China. Umkhiqizo uletha ukusetshenziswa okuningi okuvelele, ukuqonda kangcono lo mugqa wokufutha ngamaminerali, sihlanganyela sihlola ubuhle nobubi bomkhiqizo. I-Bioaqua mineral spray Ngiyacela!
I-Bioaqua Mineral Spray iwumkhiqizo ovela phakathi nezwe laseShayina, onegama lomkhiqizo elicacile, othenjwayo futhi ophelezelwa abasebenzisi abaningi isikhathi eside.
I-Bioaqua Mineral Mist inomklamo olula kodwa ovelele ngokulinganayo futhi owubukhazikhazi.
Ukuphepha nokulunga komkhiqizo kuphezulu kakhulu ngoba ukhishwa ngokuphelele ezingxenyeni zemvelo, awuqukethe amakhemikhali ayingozi esikhumbeni.
I-Bioaqua Mineral Spray isiza ukwengeza amaminerali engeziwe, isiza isikhumba somsebenzisi sihlale sithambile, sinempilo futhi sigcwele ubungqabavu.
Intengo yomkhiqizo ifanele bonke abathengi baseVietnam
Ifanele yonke iminyaka nazo zonke izinhlobo zesikhumba. Futhi ikakhulukazi ingasetshenziswa izikhathi eziningi ngosuku olungu-1, noma nini lapho isikhumba sibonisa izimpawu zokomisa, ukuqina nokungakhululeki.
Ngaphandle kwezinzuzo ezivelele ze-Bioaqua mineral spray ezibalwe ngenhla, lo mugqa wokufutha ngamaminerali nawo unokubi okuncane okulandelayo:
Njengomkhiqizo wasekhaya waseShayina, ayikho iwebhusayithi yokuthengisa emakethe yaseVietnam, ngakho abathengi baseVietnam basenobunzima bokuthenga i-Bioaqua mineral spray.
Bhekisela: [Review] Ingabe i-Caudalie mineral spray ilungile? Zingaki izinhlobo ezikhona?
Imikhiqizo Ethengiswayo 50% I-White Collagen Mineral Spray, I-Moisturizing, Idayimane Ledayimane Elingagugi (120ml), Idayimane I-Nuskin NaPCA Moisture Mist Anti-Aging, Nuskin I-Milaganics Moisturizing Rose Mineral Spray (100ml), iMilaganics I-Avène Thermal Spring Water 100715921 (300ml), Avène I-Vichy Mineralizing Thermal Water 300ml, i-VICHY I-La Roche-Posay Thermal Spring Water (150ml) – M0362200, La Roche-Posay I-Bio-Essence ene-moisturizing combo ejulile (i-Bio-Gold lotion ene-24K yegolide ekhishwe, i-rose essence 100ml + Amanzi amaminerali…, i-Bio-Essence
Ukubuyekezwa kwemigqa emi-3 ye-Bioaqua mineral spray etholakala emakethe namuhla
I-Bioaqua mineral spray iwumugqa womkhiqizo odumile futhi othengiswa kakhulu emakethe namuhla. Uma ungazi ukuthi uyini umkhiqizo I-Bioaqua mineral spray kuhle. Sicela ubheke imigqa emithathu ephezulu ye-Bioaqua mineral spray spray, etholakala emakethe namuhla:
1. I-Bioaqua Osmanthus Mineral Mist Yellow
Umkhiqizo wokuqala kwabangu-3 abaphezulu I-Bioaqua mineral spray Engcono kakhulu i-Bioaqua Osmanthus ephuzi. Lona umugqa wezifutho zamaminerali ezikhishwe esithakweni esiyinhloko sembali ye-Osmanthus kuhlanganiswe nezinye izitshalo eziningi, okwenza iphunga elimnandi njengembali. Lokhu futhi kuyisici esenza umkhiqizo uthole umusa nokwethenjwa kwabesifazane.
Umsebenzi oyinhloko womkhiqizo ukuhlanza isikhumba, kuyilapho usiza ukunikeza umswakama nomswakama esikhumbeni. Isiza ukugcina isikhumba sakho sibushelelezi futhi sithambile usuku lonke. Ikakhulukazi, umkhiqizo uqukethe iphunga elimnandi lezimbali ze-Osmanthus ukukulethela okumnandi kakhulu uma usebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 65,000 VND.
2. I-Bioaqua Blueberry Mineral Mist Blue
Igama elilandelayo kuzifutho ezi-3 eziphezulu ezinhle ze-Bioaqua minerals uPhong Reviews angathanda ukuzincoma kubafundi. I-Bioaqua Blueberry Mineral Spray eluhlaza okwesibhakabhaka. Lona umkhiqizo we-mineral spray okhishwe izithako ze-blueberry, okwazi ukunikeza nokwengeza umswakama odingekayo esikhumbeni, usize isikhumba sakho sihlale simhlophe futhi sinempilo.
Umkhiqizo wakhiwe ngokukhethekile njengesixazululo esingenambala, esiwuketshezi, esilula njengamanzi. Lapho lufuthwe esikhumbeni ngokushesha amuncwe ekujuleni ngaphakathi. Ayibangeli isikhumba esinamafutha, kodwa futhi iyasiza ekunciphiseni inani le-sebum ekhiqizwe esikhumbeni ngendlela ephumelela kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 45,000 VND.
3. Umbala omhlophe we-Bioaqua Moisturizing Mineral Mist
I-Bioaqua Moisturizing color white iwumkhiqizo wokufuthwa ngamaminerali osuka ezweni laseShayina odumile futhi osetshenziswa kabanzi namuhla. Umkhiqizo uyinhlanganisela yamanzi amaminerali nezinye izithako zemvelo. Inikeza umphumela wokuhlanza ophumelelayo, ibhalansi umswakama kanye ne-pH yesikhumba ngempumelelo.
Isici esikhethekile kakhulu I-Bioaqua Moisturizing Mineral Spray Umbala omhlophe oyinhloko awukho iphunga. Ayinatshwala, ayinaphunga, ngakho ifaneleka ikakhulukazi kwabesifazane abanesikhumba esibucayi kanye nokungezwani nephunga elimnandi.
Intengo yesithenjwa: 75,000 VND.
Ungathenga kuphi i-Bioaqua mineral spray? Malini?
Manje, I-Bioaqua mineral spray athengiswa ngamanani asukela ku-50 – 60,000 VND/150ml. Ukuze ukhethe ukuthenga i-Bioaqua mineral spray yangempela, kufanele uthenge imikhiqizo kumakheli okuthengisa ahloniphekile. Ngoba lokhu kungumkhiqizo wasekhaya waseChina, inkampani yenethiwekhi inohlelo lokusabalalisa olusemthethweni emakethe yaseVietnam.
Ungakhetha ukuthenga i-Bioaqua mineral spray ezindaweni ezinkulu nezinedumela le-e-commerce njengeShopee, Tiki, Lazada, njll. Ngaphezu kwalokho, ungacela izihlobo nabangane e-China ukuthi ba-ode okuphathelwe ngesandla ukuya e-Vietnam.
I-athikili engenhla yonke imininingwane ehlobene I-Bioaqua mineral spray. Kungabonakala ukuthi lona umugqa womkhiqizo omuhle, awugcini nje ngokuba nomklamo omuhle, izithako eziyingozi kodwa futhi uhlinzeka ngemiphumela esebenza kahle kakhulu yokuthambisa kanye neyokulwa nokuguga esikhumbeni. Usalindeni, shesha u-ode i-Bioaqua mineral spray ukuze uyizwe, besifazane.